Val d’Anniviers [Valais, CH] – i am a malagasy in genève
20 février 2007 15 mars 2010
Val d’Anniviers [Valais, CH]
Avy eo ambaravarakely any Saint-Luc, topi-maso vao maraina ireo tendrombohitra izay 4’000 m ny ankamaroany.
Avy havia miankavanana ny Besso [3’667 m sy ireo tendrony roa], ny Obergabelhorn [4’063 m], ny Mont Duran alohan’ny Cervin [Matterhorn amin’ny teny Soisa-Alemana, 4’478 m], ny Pointe de Zinal [Zinalrothorn amin’ny teny Soisa-Alemana, 4’221 m, ny tendrony ihany no tazana], ary ny Grand Cornier [3’961 m] 🙂 Tsahivina fa ny vohitra Maromokotra [2’876 m] any Tsaratanana [Antsiranana] no avo indrindra any Madagasikara.
Avo ireo tendron’ny vohitra ka lalina ny « Val ». Ny atao hoe val moa dia dikan-teny tsy lavitra ny Canyon ary fianakavian’ny Vallée, lohasaha ety [na tery], andian-tany manify teren’ny vohitra roa mifanakaiky [Vallée étroite, espace de terre resserré entre deux coteaux – atilf.fr]. Satria tsy misy sary mahafa-po avy amin’ny Google-Earth dia indro saritany misy ireo toerana fanaovana ski etsy ambany ahitana ny endriky ny topografia.
Ny Val d’Anniviers dia lohasaha mipoitra aty amin’ny tanànan’i Sierre ao amin’ny lemaka ben’ny ony Rhône ao amin’ny canton du Valais ny tapany Avaratra. Misampana roa ny Val d’Anniviers any amin’ny tapany Atsimo ka ny ilany andrefana [havanana amin’ny sary] dia ny Val de Moiry, ahitana ny tanànan’i Grimentz ary fefen’ny toha-dranon’i Moiry [barrage de Moiry]. Ny sampany Atsinanana kosa dia ny Val de Zinal mitomandavana mandalo ny tanànan’i Zinal ka mifarana eny amin’ireo tendrombohitra [avy havia miankavanana] Weisshorn, Pointe de Zinal, Obergabelhorn, Dent Blanche [manodidina ny Cervin na Mattehorn izay ao amin’ny Vallée de Saint Nicolas ambadika ao].
Ny tanànan’i Saint-Luc kosa dia tanàna amin’ny lafiny [face] ankavia amin’ireo vohitra, miloko mavo amin’ny saritany no sady miolankolana toa bibilava ny lalàna mankany*.
[*vakio – miolankolana ny lalana mandeha mankany >>]
[Saritany lohataona avy amin’ny kettler-panorama.ch >>]
Posté dans sary, tsidikaTagué alpes, foto, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, montagnes, photo, photographie, photographies, photography, photos, saint-luc, st-luc, val d'anniviers, Valaispar tomavana8 commentaires
8 réflexions sur “Val d’Anniviers [Valais, CH]”
21 février 2007 à 20:59
toa tena teny an-tampo-kavoana mihintsy ilay St Luc 🙂 Misatra an’i Toum mitondra mizaha tany fa tena mahafinaritra be:)
21 février 2007 à 21:11
Tsy misy fisaorana ! marina aloha fa tiako ny tendrombohitra 🙂
22 février 2007 à 16:35
Mampatsiaro ahy ny mpampianatro iray teny amin’ny « an-jery manontolo » (université) izay sady mpampianatra milingilingy (escalade) amin’ny fotoana mampalalaka. tsy mitsahatra mitantara aminay ny fahafinaretan’ny mpilingilingy izy rehefa tonga soamantsara eny amin’ny tendrony izy ireny. Nolazainy anay fa misy akony lehibe amin’ny toetsany sy ny fanatanterahana ary ny fanatononsany ny tanjona rehetra tiana tratrarina amin’ny fiainana hono izany. Maniry dia maniry aho ny hianika eny fa hatramin’izao mbola tsy nahita fotoana sy « occasion » foana 🙂 angamba rehefa mahazo fanasana avy aty aminao :p
22 février 2007 à 21:25
Hevitra tsara tokoa raha hanao tsidika miaraka isika. Angamba isika tsy hanao ny haute route [Chamonix-Zermatt, 7 andro] satria na amin’ny lohataona [été] aza dia mbola mila mitondra ski sy peau de phoque 🙂 Inona ary ity menamenatra miandry fanasana ity ?
26 février 2007 à 09:16
eny ary fa de re ‘zay, fa dia « hoavy tsy hoela hoatran’ny volan’ny CNAPS » hoy ny tenin-jatovo zay 😀
Ping: Malagasy faha-2 amin'ny pétanque | Mini Bol d'Or 2007 [Genève, CH] « malagasy
Ping: Eny an-tendrombohitra eny no fonenako « malagasy
Ping: Préalpes Vaudoises « Blog Archive « malagasy
← Miolankolana ny làlana mandeha mankany …
21|02|07 – Andro iraisam-pirenena momba ny tenin-dreny →